के हो मन्टेश्वरी शिक्षा ? - शिक्षा - प्रकाशितः चैत्र ९, २०७६ - नारी
कुमुद भट्टट्ट छतकुली
खासमा मन्टेश्वरी शिक्षा बालबालिकाको मनोविज्ञानअनुसार उपयुक्त ढंगले कुनै पनि कुरा सिकाउने पद्धति हो । यसमा सर्वप्रथम बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयास गरिन्छ । उनीहरूको रुचि, क्षमता, स्वभाव, प्रवृत्ति सबै कुरा बुझेपछि कुन हिसाबले सिकाउने ? के सिकाउने ? भन्ने कुरा टुंगो गरिन्छ ।
यो दबाबरहित सिकाइ पद्धति हो । यसमा विद्यार्थीले थाहै नपाई शिक्षा ग्रहण गर्छन् ।मन्टेश्वरी शिक्षामा विद्यार्थीलाई पुस्तक पढाउने होइन । सबै ज्ञानेन्द्रिय प्रयोग गरेर सिकाइन्छ । कुनै पनि कुरा हेरेर, सुँघेर, सुनेर, छामेर सिकाइन्छ ।
यसका लागि विभिन्न खेल र खेलौनालाई स्रोतका रूपमा उपयोग गरिन्छ । खेलको माध्यमबाट उनीहरूले नयाँ कुरा सिक्छन् । उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले सिक्न र खेल्न दिइन्छ ।